Infinity Ops: Online FPS 1.6.0 Android အတွက် Aptoide APK အား ဒေါင်းလုပ် ပြုလုပ်ပါ
ဗားရှင်း 1.6.0 လွန်ခဲ့သော 1 ရက်က
ဂိမ်းများ အက်ရှင် Infinity Ops: Online FPS
Infinity Ops: Online FPS ၏ ဖော်ပြချက်
လူသားမြိုးနှယျအပျေါနညျးပညာဆိုငျရာဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျမှု၏ကနျ့သတျသာလှနျလကျြရှိသညျနှငျ့ကမ်ဘာ interplanetary စဈဆငျရေး၏ပရမျးပတာသို့ဆငျးသကျတျောမူသောအခါဂိမျး၏အဖွဈအပကျြသညျဝေးလံသောအနာဂတျကာလ၌အရပကြိုယူပါ!
အားနညျး device မြားအတှကျ❖ Optimization
နောကျထပျ features တှေ
အားနညျးဖုနျးမြားအတှကျ☢☢☢ ခမျးနား Graphics နဲ့အကောငျးမွငျ! ☢☢☢
☢☢☢ သံခပျြကာလကျနကျတိုး! ☢☢☢
☢☢☢ တဈဦးကနစေ့ဉျဆုခမွ! ☢☢☢
ကြှနျတျောတို့ကို join ပေးပါ:
Infinity Ops: Online FPS အတွက် အသုံးပြုသူ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ
Infinity Ops: Online FPS အပေါ် ပြန်လည်စစ်ဆေးမှုများ
Infinity Ops: Online FPS အပေါ်တွင် ပြန်လည် စစ်ဆေးမှု မရှိပါ။ ပထမဆုံး ပြုလုပ်လိုက်ပါ!
Infinity Ops: Online FPS အား အချက်ပြပါ
pcjc2006 စတိုး 2.94k 853.83k
Infinity Ops: Online FPS နှင့် အလားတူသော အက်ပ်များကို ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲပါ
APK အကြောင်း Infinity Ops: Online FPS အချက်အလက်
ထုတျလုပျသူ Game development ltd
ကိုယျရေးလုံခွုံမှု မူဝါဒ https://eu1.destinywarfare.com/ru/policy
App Name: Infinity Ops: Online FPS
File Size: 461.61MB
Release date: 2019-09-20 06:22:55
လကျမှတျ SHA1: B9:EA:A8:5A:F1:27:38:44:AF:81:87:06:7B:B2:73:6A:24:4F:C6:C9
အဖှဲ့အစညျး (O): Game Development LTD
Infinity Ops: Online FPS APK ကိုဒေါင်းလုဒ်ဆွဲပါ